အလှည့်| Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » အလှည့် 	12
Posted by မစုဥာဏ် on Aug 26, 2015 in My Dear Diary, Think Tank | 12 comments
(photo credit to giantbomb.com)
ဒီရက်ပိုင်း ကျွန် မရဲ့ အတွေးတွေ ကို စိုးမိုးနေတာက “သေခြင်းတရား” ဖြစ်သည်။ လူတွေ သေဆုံးနေကြသည် ကို နာရေးကြော်ငြာတွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် နေ့ စဉ် နဲ့အမျှ မြင်တွေ့ ၊ ကြားသိနေရသည်မို့ ကျွန်မတို့အားလုံး သေခြင်းတရား နှင့် မစိမ်းကြ။ သို့ သော် အဆိုပါ သေခြင်းတရားက ကျွန်မ၏ မိတ်ဆွေ နှစ်ဦး(Susan နှင့် Ting) နှင့် ပတ်သက်လာသောအခါ ကျွန်မ အတွေးပိုမိသည်။ တိတိကျကျ ဆိုရသော် သေခြင်းတရား၏ လှည့်စားတတ်သည့် သဘောသဘာဝ ကို တွေးနေမိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Susan သည် အသည်းရောဂါ ကို ခံစားနေရသည့် အသက် ၃၀ အရွယ် ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရွှေဝါရောင်ဆံပင်ကောက်ကောက်၊ မျက်လုံးပြာပြာ ဖြင့် ရုပ်ရည်ပြေပြစ်လှသည်။ ကျွန်မ လက်တွေ့ဆင်းနေသည့် Mt. Sinai ဆေးရုံမှာ မကြာခန ဆေးကုသမှု လာရောက် ခံယူနေခြင်းကြောင့် ကျွန်မတို နှစ်ယောက် မကြာခန စကားပြောဖြစ်သည်။
Susan တစ်ယောက် အသည်း အစားထိုးကုသခံယူ ဖို့စာရင်းသွင်းထားသော်လည်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အသည်းအစားထိုး ကုသခံရဖို့စောင့်ဆိုင်း နေသူပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး၊ လိုအပ်နေသော အသည်း၏ အမျိုးအစားနဲ့တူရန်၊ သွေး အမျိုးအစားတူရန် စသဖြင့် လိုအပ်ချက်တွေ က များပြားလွန်းသဖြင့် အစားထိုးကုသခွင့် မရလိုက်ပဲ သေဆုံးသွားသည့် လူနာများလည်း ရှိကြသည်။
ဒါကြောင့် Susan တစ်ယောက် သူ့ကိုယ်သူ “သေလူ” ဟု သဘောထားခဲ့ သည်။ ၀မ်းနည်း အားငယ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ မယုံကြည်နိုင်ခြင်း စသည့် စိတ်ခံစားမှု အဆင့်ဆင့် ကို အချိန်ကာလ တစ်ခု အထိ ဖြတ်သန်းအပြီးမှာ Susan တယောက် သေမင်း ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင်သည့် အဆင့် ကို ရောက်နေပြီ ဟု ဆိုနိုင်သည်။
“သေရတော့မယ်လို့အသေအချာလက်ခံလိုက်တဲ့ အခါ၊ လောကကြီးမှာ နေရဖို့ အချိန် သိပ် မရှိတော့ဘူးလို့သိလာရတဲ့ အခါ၊ ကိုယ့်ဘ၀ အတွက် အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စွ တွေ က ပိုပြီး ထင်ရှား လာတယ်” လို့Susan က ဆိုသည်။
သူမသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်လောက်က စပြီး အသေးဖွဲ ကိစ္စွ အတွက် အချိန်မပေးတော့။ ဥပမာ..မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ ၊ အိမ်ရှင်းဖို့စသည့် လုပ်နေကြ အလုပ်တွေကို အပိုအလုပ်တွေလို့မြင်လာပြီး၊(အရင် က သူတန်ဖိုး မထား ခဲ့သည့် ) ဆွေမျိုးများနှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း၊ သူစိတ်နာနေသော ဖခင်ဖြစ်သူ နှင့် တယ်လီဖုန်းစကားပြောခြင်း၊ မရောက်ဖူးသေး သော နေရာများကို သွားခြင်း၊ Church မှာ ဆုတောင်းခြင်း စသည့် ကိစ္စ တွေ က သူ့ အတွက် အလေးထား စရာတွေ ဖြစ်လာပါသတဲ့။
သူနဲ့နေ့ စဉ် တွေ့ကြုံဆက်ဆံရသူတွေ အားလုံးကို နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခြင်းပဲလို့သဘောထား လိုက်သည့် အခါ၊ ယခင်က သူ့ ကို စိတ်အနှောင့် ယှက်ဖြစ်စေ ခဲ့တဲ့ သူတွေ၏ အပြုအမူတွေ ကလဲ ခွင့်လွတ် နိုင်စရာဖြစ်သွားပြီး၊ လူတိုင်းကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်လည် ဆက်ဆံနိုင် ခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။
သူ့ အပေါ် အကူအညီပေးခဲ့ဖူးသူများ၊ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများ ကို စာရင်းလုပ်ပြီး၊ ကျေးဇူးတင် ကဒ်လေးတွေ ပေးပို ခဲ့သည်။ ဒါတင်မက၊ သူသေသွားပြီးတဲ့ အခါ သူ့ အလောင်း ကို ဂူသွင်းတာမျိုးမလုပ်ပဲ၊ အစားထိုးကုသမှု အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ အတွက် ကို ခွဲဝေ လှူဒါန်းသွားဖို့ ကို တောင် စီစဉ်လိုက် သေးသည်။
အဲ… Susan တစ်ယောက် သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးသည့် အချိန်မှာ၊ သူနဲ့အသည်းအမျိုးအစားတူသည့် အလှူတစ်ခုကို ရပြီဖြစ်ကြောင်း ဆေးရုံက သူ့ ကို အကြောင်းကြား လာသည်။
အစားထိုးခွဲစိပ်မှု က အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်မနှင့် စကား ပြောချိန်မှာ Susan တစ်ယောက် ဆေးရုံမှ အိမ်သို့ပြန်ဆင်းရခါနီးဖြစ်လို့ နေပြီ။ “ကျွန်မ ကို သေမင်းက အလို မရှိသေးဘူးနဲ့တူပါရဲ့ ” လို့ရီရီမောမော ပြောနေတဲ့ သူ့ ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ ၀မ်းသာ ပျော်ရွင် ခဲ့ရသည်။
သေခြင်းတရား ကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်သွားဖို့သူ့ ရဲ့လက်ခံနိုင်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု တွေ ကို ကျွန်မ ချီးကျူးမိသည်။ သူ့ နေရာမှာ ကျွန်မသာ ဆိုလျှင် သူ့ လောက် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေနိုင်မည်မဟုတ်သည်ကား သေချာသည်။
နောက်တနေ့ မနက် အလုပ်ရောက်တော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း Ting ဆိုသည့် နပ်စ့်မလေး လူနာတွေ ကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆေးလိုက်ကုသရင်း ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း၊ ရဲက ရှာဖွေတော့မှ Brooklyn နားက မြစ်ထဲမှာ သူ့အလောင်းကို တွေ့ ရသည့် အကြောင်း အီးမေလ်းဝင်လာသည်။ အီးမေလ်းကို ဖတ်ပြီး အံ့သြစိတ်၊ မယုံနိုင်စိတ်တွေဖြင့် ကျွန်မ အလုပ်တောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့။ လူမှားသာပဲ ဖြစ်ပါစေဟု ကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းသော်လည်း မပြည့်ခဲ့။
Ting သည် အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်ကမှ သူနာပြုဘွဲ့ ကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ တဆင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကို ပြောင်းရွှေ့ လာပြီး၊ စာအလွန်ဖတ်ရသည့် သူနာပြု ဘာသာရပ် ကြောင့်၊ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေလို ပျော်ပါးချိန်မရပဲ၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်၊ ကျောင်းသွား၊ စာကျက်ဖြင့် နေ့ရက်တွေ ကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူနှင့် ကျွန်မ စတွေ့ စဉ်က ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နွေရာသီ internship အစီအစဉ် တစ်ခု မှာဖြစ် သည်။ ကျောင်းမတူ၊ ဘာသာရပ်မတူသော်လည်း၊ ဆေးပညာနှင့် ဆိုင်သည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ကိုရွေးချယ်ပြီး လူနာများကို အိမ်တိုင် ရာရောက်ဆေး လိုက်ကုသည့်အေဂျင်စီတစ်ခုက ပေးသည့် သင်တန်း တစ်ရပ်တွင်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းထဲမှာ အာရှသူဆိုလို့ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာကြောင့် က တပိုင်း၊ အဖွဲ့ ငယ်တွေ ခွဲလိုက်သည့် အခါ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်က တစ်ဖွဲ့ တည်းကျ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်မတို့ပိုပြီးရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ လိုက် Presentation တွေ လုပ်ဖို့ ၊ ကျွန်မရဲ့ အခန်းမှာ ဆုံကြ၊ စားသောက်ရင်း စာလုပ်ကြနှင့်ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ကျောင်းပြီးသွားတော့၊ ငွေကြေးအဆင်ပြေသူတွေက ဆေးရုံကောင်းကောင်း၊ နေရာကောင်းကောင်း ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဖို့အချိန်ယူကာ အလုပ်ရှာနိုင်ကြသော်လည်း၊ ငွေကြေး လိုအပ်နေသူများက တော့ ရရာ၊ လစ်လပ်နေရာ ရှိရာမှာ ချက်ခြင်း အလုပ်ဝင်လုပ်ကြရသည်။ Ting တစ်ယောက် လူနာတွေ ကို အိမ်တိုင် ရာရောက် ဆေးကုသမှုပေးသည့် အေဂျင်စီတစ်ခု မှာ အလုပ်ရသွားသည်။
အဆိုပါ အလုပ်မှာ မွန်မြတ် သော်လည်း အန္တရာယ်များလှ၏။ လူနေထူထပ် သည့် မြို့ လယ်ကောင် လို နေရာမှာ ဆေးကုသွားရလျှင် စိုးရိမ်စရာ မရှိသော်လည်း၊ နယူးယောက်မြို့၏ အချို့ ရပ်ကွက်များ က ပြစ်မှု ထူထပ်သည့် နေရာများဖြစ်သည်။ ဆေးစွဲနေသူ၊ စိတ်ရောဂါခံစားနေရသူ လူနာများ၏ အိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း သွားပြီး ဆေးဝါးကုသမှုပေးဖို့မလုံခြုံလှသော နေရာများရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တစ်ခုခု မှားယွင်းပါက လူနာက တရားစွဲဖို့ အဆင်သင့်။ ကုသမှုပေးသည့် ဆေးဝန်ထမ်းများ မမှားလျှင်တောင်မှ လျော်ကြေးငွေလိုချင်သည့် အတွက် ကြံဖန်ပြီး တရားစွဲနေသည့် လူနာတွေ က လည်း မနည်း။ ဆေးရုံမှာက တခြားမျက်မြင်သက်သေတွေ ရှိနိုင်သေးသည်။ လူနာအိမ်မှာ တခုခုဖြစ်က ကိုယ့်ဘက်မှာ သက်သေမရှိ။ ဒါကြောင့် ကျောင်းပြီးကာစ ဆေးဝန်ထမ်းများ က ဆေးရုံမှာပိုလုပ်လိုကြသည်။
Ting ရောက်လာရမည့် အချိန်တွင် ရောက်မလာသည့်အတွက် သူ့လူနာ က အေဂျင်စီကို ဖုန်းဆက်တော့မှ၊ သူပျောက်နေမှန်း သိပြီး လိုက်ရှာကြရာက နောက်တနေ့ မနက်မှာ သူ့ အလောင်း ကို Brooklyn မြစ်နားက ချုံပုတ်ကလေးမှာ တွေ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အသုဘအခမ်းအနားမှာ ပြင်ဆင်ထားသည့် Ting ၏ အလောင်းကို ကြည့်ပြီး နှမြောတသဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း နှင့် နောင်တရခြင်း စသည့် ခံစားမှု မျိုးစုံတွေ ဖြစ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးသည့် ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ၀န်းကျင် လောက်က Ting ပို့ပေးသည့် နှစ်သစ်ဆုတောင်း အီးမေလ်းကို ရခဲ့သော်လည်း၊ စာမေးပွဲတွေနှင့် လုံးပန်းနေခဲ့သည့် အတွှက် ကျွန်မ စာမပြန်ခဲ့မိ။ သူ လူနာတွေ အိမ်မှာ ဆေးလိုက်ကုနေသည်ကို ကြားလိုက်သော်လည်း အဆင်ပြေလား ဆိုပြီး ကျွန်မ မမေးမိ။ ဒါကြောင့် နောင်တရမိခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းကနေ messge တစ်ခုတောင် မပို့နိုင်သည့် အထိ ခနတာ အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့မိသည့် အတွက်ကြောင့် ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။
သင်တန်းအတူတူတက်စဉ်ကလဲ … ခံစားမှု ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလေ့ မရှိတတ်သည့် အာရှသူများပီပီ၊ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက် ကောင်းကြောင်း ကို တစ်ယေက်က စကားလုံးများဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့လေ့မရှိခဲ့၊ အတန်းထဲမှာ တခြား အမေရိ ကန်မလေးများက “I miss you” တို့ ၊ “you are so sweet” တို့စသည့် အပြောလေးများဖြင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တွေ့ ကြလျှင် ဖက်ကြ၊ နမ်းကြ လုပ်ကြတာမျိုးလည်း ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် က မလုပ်တတ်ခဲ့ကြ။
အခု သူသေသွားတော့မှ သူ့ ရဲ့ကောင်းကြောင်းလေးတွေ၊ သူ့ အပေါ်ဘယ်လို သဘောထားတယ် ဆိုတာလေးတွေ ကို ကျွန်မ ပြောခွင့်မရခဲ့သည်ကို နောင်တရမိသည်။ မိမိအလေးထားသူများ၊ ရင်းနှီးချစ်ခင်သူများ ကို အလေးထားကြောင်း၊ ချစ်ခင်ကြောင်း ပြောဖို့ ၊ ပြသဖို့အချိန်မဆွဲသင့်သည့် သင်ခန်းစာ ကို ကျွန်မရခဲ့သည်။ Ting ကတော့ ပန်းတွေနှင့် လှလှပပ၊ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လှဲလျောင်းနေခဲ့သည်။ လိုက်လံပို့ဆောင်သူတွေ ၏ ငိုကြွေးသံ၊ မှာကြားသံများကို ကြားနိုင်သည်လား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ ဝိဥာဉ်က ကျွန်မတို့ တွေ နားပျံဝဲပြီး မငိုကြဖို့ လိုက်ပြီး တိုက်တွန်းနေမလား။ သူ ဘာ့ကြောင့်သေသည်၊ တရားခံက ဘယ်သူ ဆိုတာက နောက်..အခုတော့ ..လူနာတွေကို သေမင်းလက်က ကယ်ဆယ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိသူတစ်ဦး ကို ထိုသေမင်းက လက်ဦးသွားခဲ့ပြီ။
ကျန်းကျန်းမာမာ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် နောက်ထပ် မာစတာ ဒီ၈ရီ ဆက်တက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော နပ်စ့် မလေး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရလေပြီ။ သူ့ မှာ Susan လို သေမင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့။ သူ့ဘ၀အတွက် အရေးကြီးသည် ထင်သော ကိစ္စများ၊ အရေးပါသော သူများကို နှုတ်ဆက်ချိန်မရခဲ့။
သေတော့မည်ဟု ထင်ထားရသည့်သူ ကို ပြန်လည်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီး၊ မထင်ထားသည့် သူ ကို အရိပ်အမြွက်လေးပင် မပေးပဲ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့်အနှီ သေမင်း၏ လှည့်စားတတ်သည့် သဘောသဘာဝ ကို ကျွန်မ တုန်လှုပ်မိသည်။ တဆက်တည်းမှာပင် သေခြင်းတရားအတွက် ကျွန်မ ဘာမှ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးသည်ကို လဲ တုန်လှုပ်စွာ သတိထားလိုက်မိသည်။ (ဒီနေ့ မနက် FB ဖွင့်လိုက်တော့FB reminder က “4 years ago” ဆို ပြီး Ting မကွယ်လွန်ခင်က ကျွန်မတို့ တွေ အဖွဲ့ လိုက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံပေါ်လာလို့ ၊ သူ ဆုံးကာစက ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီမှတ်စုလေးကို ရွာထဲ ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မတ်လ ၁၃ရက်၊ ၂၀၁၂ တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့် သူငယ်ချင်း Ting အတွက် အမှတ်တရပါ)
kai says: ဒီနှစ်ပိုင်းတွေထဲ.. အင်မတန်”စွမ်း”တဲ့.. သူတွေ.. သူတို့ဘ၀တွေ.. ဖတ်ကြည့်လေ့လာနေမိပြီးသကာလ..
သေခြင်းတရားဆိုတာ.. အကောင်းဆုံးသော.. သဘာဝလက်ဆောင်လို့ထင်မိတယ်..။
သေခြင်းတရားကြောင့်သာ.. လူယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်လာတယ်…လို့..။
လူတွေကြိုးစား.. နှိုးကြား.. ကြတယ်လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
aye.kk says: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး
မစုဥာဏ် says: ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပါ့မယ်
မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို တစ်လလောက် မဟာစည်နဲ့ ချမ်းမြေ့ ရိပ်သာတွေမှာ တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်
ခုတော့ ၅ မိနစ်တောင် အနိုင်နိုင်ပါ
သံပတ်ပေးထားတဲ့ စက်ရုံတွေလိုပဲ တနေ့ တနေ့ ကုန်သွားတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူများအလှည့်တွေ ကြည့်နေရတုန်းကတော့ ကိုယ်နဲ့ အဝေးကြီးလိုပဲ ခံစားနေရတာ။
ကိုယ်နဲ့ နီးကပ်သူတွေ အလှည့်မှာ ကြောက်မိပြန်ရော။
နောက်တော့လည်း မေ့ပြီး နေ့ပေါင်းများစွာ မသိလိုက်မသိဖာသာကျင်လည်မိနေပြန်ရော။
တစ်နေ့ရောက်ရမဲ့ ပန်းတိုင်ဆိုပေမဲ့လည်း အချိန်မတန်ပဲရောက်သွားသူတွေမြင်တော့လည်း ရင်နာရတာ။
မစုဥာဏ် says: ကျွန်မလဲ တရားရလိုက် မေ့ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ .. ကိုယ့်အလှည့် အတွက် ဘာမှ မပြင်ဆင်ရသေးဘူး
ဝေဒနာ သိပ်မခံစားရပဲ, နာတာရှည် ရောဂါနဲ့ အိမ်သားတွေ ကို ၀န်ပိုပေးတာမ်ျုး မဟုတ်ပဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သွားချင်တာ
Mike says: .အင်း..မစုဥာဏ်ရဲ့ဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး…အလန့်တကြားသတိရလိုက်တာကတော့…
အခု သူသေသွားတော့မှ သူ့ ရဲ့ကောင်းကြောင်းလေးတွေ၊ သူ့ အပေါ်ဘယ်လို သဘောထားတယ် ဆိုတာလေးတွေ ကို ကျွန်မ ပြောခွင့်မရခဲ့သည်ကို နောင်တရမိသည်။ မိမိအလေးထားသူများ၊ ရင်းနှီးချစ်ခင်သူများ ကို အလေးထားကြောင်း၊ ချစ်ခင်ကြောင်း ပြောဖို့ ၊ ပြသဖို့အချိန်မဆွဲသင့်သည့် သင်ခန်းစာ ကို ကျွန်မရခဲ့သည်။ .ဟုတ်တယ်ဗျာ…အချိန်တိုင်းသေနိုင်တာဖြစ်လို့ သတိမပြတ်ထားသင့်ပါတယ်…ကျေးဇူးပါဗျာ
မစုဥာဏ် says: ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေက စိတ်ထဲရှိတာကို စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ အားနည်းကြ, နှောင့်နှေးတတ်ကြတယ်, မိဘတွေကို ချစ်ပေမယ့် ချစ်ကြောင်း မပြောမိဘူး, တချို့မိဘတွေဆို သေသာသွားတယ် သားသမီးဆီက ချစ်တယ် ပြောတာ မကြားသွားလိုက်ရဘူး .. ကိုယ်အမူအရာနဲ့ ပြတာတွေကို ကြည်နှူးရတာပဲ များတယ်
ဒီမှာတော့ ဖုန်းဆက်ရင်တောင် “I love you mom” ဆို ပြီး ပြောကြတယ် (တကယ် နေမကောင်းရင် ဆေးရုံမှာ လာတောင် မတွေ့ပဲ ပန်းခြင်းတွေ ပို့တာမျိုးလဲ မြင်ဖူးပါရဲ့) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ငါသေတော့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေးကို ခဏခဏစဉ်းစားခဲ့မိတယ်။ မသေခင်တော့ ကောင်းတာလေးတွေ တွေးပြီး လုပ်ကိုင်သွားချင်တယ်။
black chaw says: သေခြင်းတရားအတွက် ကျွန်မ ဘာမှ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးသည်ကို လည်း
တုန်လှုပ်စွာ သတိထားလိုက်မိသည်။ အခုတလော တကယ်ကြီးကို တွေးမိနေတာက
အဲဒီ သေခြင်းတရား အကြောင်းပါပဲ ဗျာ…။
ဘာမှ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး ခင်ဗျူ…။
မစုဥာဏ်ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး အသိတရားလေး တစ်ခု ရလိုက်ပါတယ်…။
ဘယ်အချိန်ရောက်လာမယ်မှန်း မသိတဲ့ သေခြင်းတရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့
အခုချက်ခြင်း ပြင်ဆင် ထားသင့်ပါတယ်ဆိုတာ ပါပဲ…။
မိမိအလေးထားသူများ၊ ရင်းနှီးချစ်ခင်သူများ ကို အလေးထားကြောင်း၊
ချစ်ခင်ကြောင်း ပြောဖို့ ၊ ပြသဖို့ 
အချိန်ဆွဲမနေသင့်ဘူး ဆိုတဲ့ မစုဥာဏ် ရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာကို ကျွန်တော်လည်း လက်ခံရယူသွားပါတယ်ဗျာ…။
Ma Ma says: သေမယ်လို့လက်ခံပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လောကကြီးကို မြင်ပုံပြောင်းသွားပြီး အရေးကြီးတာတွေကို လုပ်ဖြစ်သွားတာ အမြတ်ပဲ။
အနိစ္စတရားကို နှလုံးသွင်းထားရင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ နည်းသွားတယ်။
အကျိုးများတဲ့စေတဲ့ စာတွေမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: ငါသည်…မုချ သေရမည်… အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည်…
ငါ လုပ်ချင်တာသည်… မည်သူ့ကိုမျှ မထိခိုက်သော….
ထို့အပြင်…အခြားသူများအား အကျိုး ရှိစေသော…အလုပ် ဖြစ်ရမည်… ပလို့ဂျိ….
Shwe Ei says: -ကျနော်ကတော့ သေခြင်း နဲ့ ရှင်ခြင်း ကြားက နေခြင်းအကြောင်း
-စဉ်းစားမိတိုင်း အမြဲ ဒွိဟဖစ်တယ်
-သေဖို့အတွက် အမြဲပြင်ဆင်ပြီး .. လောဘတွေ အတ္တတွေ နောက်ပို့ထားရင်လဲ
-နေဖို့ အတွက် အမြဲပြင်ဆင်ပြီး လောဘအပြည့်နဲ့ ကြိုးစားပြန်ရင်လဲ
-အစွန်း၂ဖက်လွတ်အောင် နေတတ်ဖို့က တစ်ခါတစ်လေ အတော်လေး